Hunhu 8 Hunhu hwe "V" Ery Yakanaka Brand | Martech Zone
Kwemakore ini ndaiwanzo poo-poo iyo pfungwa yekumaka. Boka revanobata-vanotya vanhu vachipokana nezve hue yegirini mune logo yakaratidzika kunge yekunyepedzera kwandiri. Saizvozvowo mutengo wemutengo wemasangano ekumaka ayo aibhadharisa makumi kana kunyange mazana ezviuru zvemadhora.
Mbiri yangu iri muinjiniya. Iyo chete kodhi kodhi yandaitarisira yaive kuisa waya pamwechete. Basa rangu raive rekushungurudza zvakatyoka ndozozvigadzirisa. Kufunga uye kunetsekana kwaive hunyanzvi hwangu - uye ini ndakavatora mukushambadzira kwedhatabhesi uye pakupedzisira pawebhu. Analytics anga ari maschematics angu uye ini ndakango shungurudza kudzokera kuzvinhu zvaitadzisa vatengi kubva mukuvandudza kwavo kutendeuka mitengo.
Kwemakore gumi apfuura, zvakadaro, maonero angu uye kuonga kwekumaka zvakachinja zvakanyanya. Chikamu chenyaya yacho ndechekuti sezvo isu tichinetsekana tichidzokera kunobva nyaya yacho - isu taiwanzoona mipata mukuedza kwevatengi pamhepo. Kana mutengi aine hombodo yakasimba uye izwi, zvaishamisa kuti zvaive nyore sei kwatiri kutora tochi, kuburitsa zvimwe zvinoshamisa zvemukati, uye kuita kuti zvese zvishande.
Kana mutengi asina kumbobvira aenda mukumakisheni ekushambadzira, zvaigara zvichirwadza kunzwisisa kuti vaive sei, maratidziro avakaitwa online, uye maitiro ekugadzira chiratidzo chakabatana icho vanhu vachatanga kuziva nekuvimba. Kushambadzira ndiyo hwaro hweyese nzira yekushambadzira… ndazviziva izvozvi.
Sezvo ini ndaitarisa kune avo vatengi avo vaive vakanyatso nyorwa mushe, ini ndakanyora gumi nematanhatu hunhu hwandakaona mune yavo mhando. Zvekuseka, ndakatsvaga mazwi ane tsamba "V" yekukurukura imwe neimwe… netariro yekuti zvinoita kuti zvive nyore kuyeuka.
zvekuona nemeso - Izvi ndizvo zvinofungwa nevanhu vazhinji kuti chiratidzo. Ndicho chiratidzo, mucherechedzo, mavara, typography, uye maitiro echinhu chinoonekwa chakabatana nekambani kana zvigadzirwa uye masevhisi.
izwi - Beyond visuals, as we wander into strategies for content and social, Tinofanira kunzwisisa izwi rechiratidzo. Ndokunge, meseji yedu mesei uye tiri kuidzosera sei kuti vanhu vanzwisise zvatiri.
Vendee - Mucherechedzo haungomiririri kambani chete - zvakare unogadzira chisungo chemweya nemutengi. Unoshumira ani? Izvo zvinoratidzwa mune zvaunoona uye nezwi rako? Coke, semuenzaniso, ine yechinyakare chitarisiko uye inofara izwi. Asi Red Bull inonyanya kuputirwa kumusoro uye yakanangana nevateereri vayo vemitambo yakaoma.
Vicinity - Ndivanaani vanokwikwidza vanokukomberedza? Ndeipi indasitiri iwe yauri? Mazhinji makambani ari kushandira yakatarwa indasitiri uye achipihwa mazita akasarudzika asi zvakare akaenderana neindasitiri iyi yakakosha zvakanyanya. Kune vanovhiringidza, zvirokwazvo… asi kune chikamu chikuru, iwe unoda kuratidzika kuvimbika uye kugona kune vezera rako.
kushanduka - Uye sezvo iwe usiri kuda kutaridzika uye kurira kunge vezera rako, unozviparadzanisa sei navo? Ndezvipi zvako Yakasarudzika Kukosha Chirevo? Chimwe chinhu chinofanira kunge chiri pachena muchiratidzo chinokuisa parutivi kubva kune vako vanokwikwidza.
tsika yakanaka - Hazvina kukwana mazuvano kuti uve mukuru pane zvaunoita, iwe zvakare unofanirwa kuve neanoyemurika mhando kana chivakwa chakabatana neyako brand. Zvichida chimwe chinhu chakareruka sekutendeseka - kana kuomarara mukushandira kwaungaita nharaunda. Vanhu vanoda kuita bhizinesi nevanhu vari kukanganisa shanduko - kwete kungoita mari.
ukoshi - Nei izvi zvakakosha kubhadhara iwe kune chako chigadzirwa kana sevhisi? Zvese pamusoro pechiratidzo chako zvinofanirwa kuona kuti kukosha kwebasa rako kunopfuura mutengo wazvo. Izvi zvinogona kuve kuvandudzwa mukubudirira, kuvaka kudiwa kukuru, kudzikisa mitengo, kana chero nhamba yezvinhu. Asi chiratidzo chako chinofanira kuratidza kukosha kwauri kuunza kune vatengi vako.
Vehemence - Iri izwi rinotonhorera, eh? Ndeipi kambani yako inofarira? Kushushikana kunofanirwa kuve chombo chakavanzika mune yega nzira yekumaka nekuti vehemence inopararira. Passion imanzwiro anotsvaira vanhu kubva patsoka dzavo. Chiratidzo chako chinoratidza sei kuda kwako?
Ramba uchifunga, ini handisi nyanzvi yekumaka ... asi isu tinotora uko nyanzvi dzekumaka dzinosiya uye taona zviri nyore kwazvo kugadzirisa matambudziko nekuzadza zvemukati patinonzwisisa, zvinogona kufanana, uye kutaura chiratidzo chekambani.
Kana iwe uchida kuverenga zvimwe pakumaka, ini ndinokurudzira bhuku raJosh Mile - Bold Brand. Izvo zvakanyatso kuvhura maziso angu kune dzimwe dzakakosha nyaya dzataive tichinetsana nevamwe varikunetsa vatengi uye zvimwe zviedzo zvataive tichiita zvemukati.
Tags: izwi rechiratidzobrandingindasitiriukoshimusiyanochirondavendeepedyokunakachinoonekwa chiratidzoizwi rechiratidzo